SAWIRRO XUL AH: Puntland oo kullankii labaad bar baro gashay iyo ……. – Gool FM
SAWIRRO XUL AH: Puntland oo kullankii labaad bar baro gashay iyo …….
jilacow December 15, 2017
(Muqdisho) 15 Dis 2017.Puntland ayaa mar kale bar baro heshay, waxaana ugu dambeyn ay xaqiijisay in ay kaalinta labaad ugu soo baxday guruubka B.
Ciyaar xiiso badan ayaa Puntland iyo Koofur Galbeed waxa ay ku yeesheen garoonka Koonis, iyadoo qeybtii hore lagu kala nastay 1-0 oo ay ku hogaamineyso Koofur Galbeed,waxaana u dhaliyay xiddiga daafaca ee Cabdulaahi Xasan.
Dadaal xoogan ay sameysay Puntland qeybtii labaad ee ciyaarta ayay la timid goolka bar baraha taa oo u suuro galiyay inay ugu soo gudbaan Semi Final ka tartanka,waxaana u dhaliyay xiddiga Maxamuud Maxamed.
Koofur Galbeed ayaa kaalinta koowad uga soo baxday Group ka B waxa ayna ku dhici doontaa midkood Galmudug iyo Jubbaland, halka ay Puntland ku soo baxday labaad iyadoo ku dhacday Banaadir, xilli tartanka ay isaga hartay Hirshabeele.
Taageerayaasha Bayern Munich oo ku kacsan kooxdooda (Maxaa halaysan)
Qorshe ay wado Inter oo Mauro Icardi u sii dhawaynaya Real Madrid